I-Studio Bijou - I-Airbnb
Iindwendwe zeholide, abantu bezoshishino, abakhweli beebhayisikile, abahambi baza kufumana kunye nathi: Istudiyo esihle. Izixhobo: iibhedi ezimbini, ifriji, i-microwave, umatshini wekofu we-Nespresso, i-TV enkulu, igumbi lokuhlambela labucala, i-Wifi yasimahla (i-Wifi).
Ungakwazi nokubhukisha i-Studio Bijou kunye neflethi okanye indlu ekwicomplex yasebukhosini: iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-2 1/2. Izixhobo: Amagumbi okulala ayi-2, iiTV eziyi-2, ikhitshi elinento yonke, amagumbi okuhlambela ayi-2. Elona nani likhulu labantu: abantu abadala abayi-5 nomntwana omnye. Ixabiso kwisicelo.
Iinkcukacha malunga nesitudiyo sethu uBijou:
- Isitudiyo esikhulu esikhanyayo esineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Ikhothi iyafumaneka.
- Ifriji, iMicrowave, umatshini wekofu weNespresso
- i-TV enkulu, i-wifi ekhawulezayo yasimahla (iWifi)
- Igumbi lokuhlambela elitsha, elinefenitshala yale mihla neshawa, indlu yangasese,
ibhaskithi yokuhlamba impahla - Indawo yokupaka esecaleni kwendlu
- I-Cot and Tripp Trapp iyafumaneka
Indlu engatshayiyo, ukutshaya kuvumelekile
kwintente. Iilwimi: D, E, F
4.87 · Izimvo eziyi-40
- I-St. Iddaburg (i-966 m ngaphezu komphakamo wolwandle) inokufikelelwa ngemoto ngemizuzu eyi-10.
- Indawo yegalufa iJohn's Golf yimizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kuthi.
- I-Fischingen Abbey yimizuzu emi-5 ngemoto evela kuthi.
- Ikliniki yaseDussnang yoBuyiselo luhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kuthi.
- Indlela kaSt James ukusuka eConstance ukuya kwiRapperswil ikwabizwa ngokuba yiSchwabenweg. Oku kukhokelela e-Oberwangen nje kudlula indlu yethu.
-Kwilali yethu kukho eyona ndawo inde ye-ski lift kwiCanton yaseThurgau.
-Iikhilomitha ezingama-900 zeendlela zebhayisekile eziphawulweyo kwiCanton yaseThurgau kunye neendlela ezintle zokuhamba kunye nokunyuka intaba.
Sihlala kwisitrato esikhulu saselalini, yaye ingxolo yesitrato imele ilindelwe kusasa nangokuhlwa.
Sinokhetho olukhulu lweencwadana zohambo, iimephu zokuhamba intaba kunye nethayimthebhile yezithuthi zikawonke-wonke. Singakuvuyela ukukucebisa ngesicelo.
Sinokhetho olukhulu lweencwadana zohambo, iimephu zokuhamba intaba kunye net…